UNHCR oo abaal marin rabta 9 Soomaali ah oo cabiray dhibka heysta qaxootiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
UNHCR oo abaal marin rabta 9 Soomaali ah oo cabiray dhibka heysta qaxootiga
Muqdisho – Mareeg.com: Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ayaa maanta ku dhawaaqday magacyada 9 qof oo Soomaaliya, kuwaas oo ku guuleystay abaal-marinno, kuna kala sugan dalalka Soomaaliya, Kenya, Itoobiya iyo Yemen.
Xubnaha ku guuleystay abaal-marinnada UNHCR oo ku tartamay saddex waxyaabood oo kala ah curin qoraal ah, hal-abuur iyo farshaxan ayaa kala ah Saciid Maxamuud Ciise, Xuseen Xasan Daahir, Cabdullaahi Cabdi Xasan, Barre Sheekh Cabdullaahi, Bashiir Xaaji Maxamuud, Cabdullaahi Yuusuf Aadan, Cabdiraxmaan Cabduqaadir Cismaan, Cabdi Maxamed Cabdi iyo Maxamed Koronto.
Madaxa UNHCR ee Soomaaliya, Alessandra Morelli ayaa sheegtay inay tartanka ugu talagaleen in lagu dhiirrigeliyo dadka qaxootiga ah, laguna soo bandhigo dhibaatooyinka haysta.
Ku dhawaaqista abaal-marinta ayaa lagu soo beegay xuska maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan 20-ka June, waxaana la filayaa in dadkaas la siiyo abaalmarin.
Dadka ku barkacay colaadahan 20-kii sano ee ugu danbaysay ayaa la sheegay in ay gaaarayaan 45.2 Milyan oo ruux sida lagu xusay warbixin ka soo baxday hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga adduunka ee UNHCR.
Intii u dhaxaysay sanadihii 2011-ka ilaa 2012-ka waxaa qaxooti ahaan loo diiwaan galiyay dad gaaraya 2.6 Milyan oo ruux, iyaga oo ku biiray tiradii hore, waxaana jira tiro kale oo garaysa 28. 8 Milyan oo iyagana lagu qasbay in ay ka qaxaan xuduududaha wadamo badan oo adduunka ku yaalla.
Waxaa jira tiro kale oo gaaraysa 15.4 Milyan oo iyagana qaxooti cusub ah, kuwaasoo siyaabo kala duwan loogu dhibaateeyay wadamadii ay ku noolaayeen, waxaana kaalinta koowaad kuwada jira wadamada kala ah Iiraan, Afgaanistaan iyo Bakistaan.
Soomaaliya oo kaalinta labaad fadhida waxaa dagaallada sokeeye ka cararay dad gaaraya 1.1 Milyan oo ruux, kuwaasi oo badankood laga diiwaan-galiyay xeryo ku yaalla meelo kala duwan oo adduunka ah gaar ahaan Kenya.
Kaalinta sedexaad ee kala saraynta arintan waxaa so galay dalka Ciraaq oo ay ka qaxeen dad gaaraya 746,000 oo ruux halka Siiriya oo ku jirta afraadna ay ka barakceen dad gaaraya 471,000 oo u badan dumar iyo caruur.
UNHCR ayaa sheegtay in dad ku dhow hal milyan oo qaxooti ah oo wadamo shishieeye u barakacay ay wali sugayaan sharciyo ay kala helaan wadamada ay iska dhiibeen, iyaga oo qaarkood aan loola dhaqmin sidii la rabay.
Sidoo kale Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada ugu badan la diiwaan galiyay ilaa sanadkii 1993-dii, markaasoo colaadaha sokeeye ay bilow ahaayeen, waxaana si rasmi ah hadda UNCHR ay gacanta ugu haysaa tira ka badan 35.8 Milyan oo ruux
Wadanka jarmalka ayaa kaalinta koowaad kaga jira wadamo gaaraya ilaa tobon oo marti-galiyay qaxooti tira badan, waxaana kuwa kale kamid ah Iiraan, Kenya, Shiinaha iyo waliba Turkiga, inkastoo mararka qaar ay dhaleecooyin la kulmaan.
Ugu danbayntii sanadkii 2010-kii waxaa wadanka Angola iska dhiibay qaxooti garaya 15,000 oo 11,900 oo kamid ah ay ka soo carareen colaadaha ka jira wadanka Congo, inkastoo ay jiraan tiro kale oo iyagana sanadkii 2011-ka iska dhiibay wadanka Zambia.
RW Cabdi Weli: Ma sahlana soo celinta qaxootiga